Ciidamo Gurmad ah oo ku Qul-qulaya Jiidaha dagaalka ee Tukaraq (Warbixin) | Kalshaale
Ciidamo Gurmad ah oo ku Qul-qulaya Jiidaha dagaalka ee Tukaraq (Warbixin)
May 16, 2018 - 20 Aragtiyood
Laascaanod (Kalshaale) Dagaalkii ka socdey aaga Tukaraq ee gobolka Sool ee u dhexeeyey Puntland iyo Somaliland ayaa istaagey xiligii makhribka Xalay wakhtiga Soomaaliya, waxaana uu socdey muddo 10 saac ah. Dagaalka ayaa u qaybsanaa dhawr qaybood waxaana bilowgiisu ka dhacay hawdka u dhexeeya Boocame iyo Tukaraq, dagaalkaas oo ka dhacay laba aag ayaa waxaa uu qaboobay duhurkii kadib markii roob xooggan halkaas ka da’ay. Dagaalka labaad ayaa ka dhacay ka dhacay waddada laamiga ah.
Magaaalada Tukaraq ayaa cidlo ah waxaana ka qaxay dadkii deganaa halkaas. Sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal gelinkii danbe ee maanta ayaa dagaalku badnaa mid la isku garaacayo madaafiicda culus sida qoriga PM-ka.
Dowlada Puntland iyada Hada joogta Tukaraq buundada way ka soo gudbeen hada .
Gaadhigan waxaa ka cararay snm .
Ciidadamada dowlada puntland dhinackasta bay u dhaafeen Tukaraq hadey hawdka tahay iyo hadey Nugaal tahay . Kooxdii snm isweer baa laga haya mid midba loo toogan walahay .
Saacadaha soo socda waa inoo Caynaba .
Snm waxay naga haysa kaliya taangi isaguna meel God ah buu ku dhacay waana ka soo reebayna .
Shalay dagaalka reer Boocame baa wacdaro dhigay kkkkkkkkkkkk nimanka dhinaca Boocame baa lagu jabiyey oo weerar lagaga soo qaaday ka dibna dhinaca Laamiga baa lagaga soo Dhuftay dee Kabahaygii meeye baa ka dhacday kkkkkkkkkkkkkkkk
Maanta Taleex baa sugayna iyaguna cadowga soo hujuuma !!!!
Dagaalku waa inuu noqda Garbo siman . Lolz
A. Isku fiirsada Cadoowgu Ha isku jaabe!! Kadibna caagta wada mariyaa Dhulbahantoow!!
B. Ama Siidini labada Dhinaac taagero oo idinku ku jaba!!
Labadii qolo ee soomaali ugu been badnayd ayaa meesha wax isku tuur tuuray marka wey nawereeriyeen ee say wax u dhaceen.
Ma dad badan meesha u dhintay mise waa beenahoodii.
War dadka yaan la isku laynin kollay meel la kala tagi maayee.
Dagaalkii waa socdaa. Guulahana iyaga ayaa isa sheega.
Marka, ha deg degin, ee sug inta dagaalka lagu kala baxayo.
Meeqo sanadood baanu lahayn, war IIDOOROOW gurigiina jooga.
SOOMAALI WEYN dagaal weey ku khasaartay.
Wagash-wagash, ha kaa saarto maantay.
Waxaanse la yaabay khudbadii MUUSE BIIXI oo isku dhex yaacay, markii uu JAALLEE SIYAAD soo qabsaday oo qabiil ahaan u caayey, ayaa waxaa u jawaabay, wiil OGAADEEN ah oo ka soo jeeda Deegaanka SOOMAALIYEED ee ETHIOPIA, oo ku yidhi:
== MADAXWEYNE, SIYAAD BARRE waa kaa hooseeyaa, ee sheekada iyo xaqiiqda jirta ku hadal.
MUUSE BIIXI intuu naxay, buu yidhi, mayee, se kale ayaan ula jeeday.
Midkasta wuxuu leeyahay wax baan baabi’yey hadana midkasta meeshuu joogey ayuu joogaa say wax u jiraan.
Baho xabasho waxay rabaan inay inyar oo lacag ah ku helaan beenta ay shubayaan.
Aduunkuna wuu bartay hada oo loo juuqi maayo.
Goorma ayaa lagu kala bixi, labo isbuuc bil ama 100 sano.
Waxaa lagu kala baxayaa markii nin waliba uu imaansado gurigiisa.
SOOMAALI WEYN qabiil beey isku leeysay. Qabiil beey u kala fadhidaa.
Walalaheena IIDOOR, walee xabbado se fiican uma karin.
Walaalaheena IIDOOR walee xabbada kuleelkeeda ma arag.
Laga soo bilaabo 1991, wax xabad ah kuma dhicin.
Marka, iyaga ayaa kardarada wada. Markii ay garoosadaan in ay qalad ku dagaalamayeen, ayaa xabbado joogsanaysaa.
Ani xabbad waa soo arkay. Soomaliyana waa ka dagaalamay. Waxaan lug ku maray, laga bilaabo Tuulada BANDIIRADLEEEY ilaa iyo DHOOBLEEY.
Waxaan kaloo se gaar ah uga dagaalamay, BARAAWE.
Waan aqaan xabbad. SOOMAALI WEYN wax u dhaamaa WALAALOO iga durug, iyo nabad iyo cadaalad wax u dhaanta garamaayo.
Gardarada Ninkii Gudinayaa, Godolkan Gaaxdeeda
Geyi Guulahay kuu GarRaan, Waxaad ku Joogtaa
Waa Godoob Guuguuluhu Garanaayeeeeeeeeeeee,
Gabanada Galbeed Laga Soo Gudiyey, Xaqdarey
ku Goayaan, Naarina Waw GadaalLeeeeeeeeeee,
Geyi Guulahay kusiin, Ninka U Goayoow, Labada daarood waad Gabtaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Xaqdarada waa Lagu Gubtaa, Hadaadan Garaadka
Godob Guuna, kuwii Galbinaayey, Guulahay Uma
Gargaarooo, maalinta Laysgaloeeeeeeeeeeeeeeeee,
Kkkkkkkkk waxaasaa 6 bilood lasoo abaabulayay anagu dabaaldag ayaanu kujiraa warkaaba mahayno ama 4 aag kasoo dagaal taga ama isku caara laba guuto ayaa iskakiin difaac day ciidamadii waakuwaa muuse hor gaardiyaya
Cabaadka jooji. Nimanka HARTI iska dhici, ama gurigooda uga tag, oo iimaanso gurigaaga.
Hingiriis baa i siiyey SOOL IYO CAYN laga yeeli maayee.
Joojiya hadalka beenta ah ee ah:
++ DAWLADA FEDERAALKA na soo hajuuntay.
++ DAAROOD baa dagaalka nagu soo qaaday.
Waxa kula dagaalamayaa waa DHULBAHANTE IYO MAJEERTEEN.
Qof kale ma waheliyo. Shalay waa maqleen MUUSE SHAANI wuxuu ku hadlaayey, isaga oo isku dhex yaacay.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk miyaad murqaansan tahay kkkkkkkk oo markaad anoo qoriwata oo isku muuqano iska tageysid ma Caano baan ku Lisaya kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waxaas sxb ma jiraan markii aad jabtay baad xunbo cuskatay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
War kuwii snm Somaliya iyo Farmaajo bay ku waasheen kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kibir waxaad La Kadaalidaba, Marbaad Ciil kamuudh_Yootaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Kardhashaduba keli kuguma Ahaateen, Haddaad
Kibirka Kaadsan LahaydDeeeeeeeeeeeeeeeee,
Korofkii Kunbiin Korka Dhaafaa, Marbuu Kardhaaf U
Ninwaliba Aduunyada wuxuu kasbadaay, waa Lakulan_SiinNeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Nin kibiir karRaara, iyo Nin KaadsadDaa, Kasbashada
waa Loo Kala Kadieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Tukoraq Wali anaa jooga God qaboobena kaa saaray wixii aad 6 bilood tolaay yaa Daarooda aad lahayd ma sidaasay kudanbeyeen Wali anagu waanu dabaal dagaynaa warkaaba mahayno
God Nin Gurada ugu JirRaaa, Galad Baan Gaadhey,
Guuguuluhu uma GaraabinNeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Guuldaradii kalshaale, ee Lakulansiiiyey, Kaba La Aant_Ta uu Kabrarada ka Boodaayey, Kaabiga markey
Kor DhigGeen, Kolanyo Daraawiisha, Kaaleefyoba
kuma wadDaan, kubka Hoostiiseeeeeeeeeeeeee,
Kadeedkuu ka kabadaay, kolon yooyinkii kalshaale,
Godka uu Nafta ku Kadeedaa, uga Daraan kalshaalihii
Kadeedka La kulan Siiyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,